Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) - Hello Sayarwon
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်)
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Xorim® ဟာ လူကြီးရော ကလေးမှာပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး ဖြစ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ cephalosporin အုပ်စုဝင် ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်နှင့် ရင်ခေါင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊အရေပြားနဲ့ တစ်ရှုးတွေမှာ ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုးတွင်း ပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်ကာအမြှေးပါးပိုးဝင်ခြင်းတို့ကို ကုသဖို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ပိုးဝင်ခြင်းတွေကိုလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Xorim® ကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ပုလင်းချိတ်နိုင်သလို သွေးကြောထဲ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အသားထိုးဆေးအဖြစ် ကြွက်သားထဲထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့အခါ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် သူနာပြုကသာ ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Xorim® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Xorim® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Xorim® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Xorim® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Xorim® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိရင် Xorim® ကို မသုံးစွဲရပါဘူး။
cephalosporin အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် cefuroxime ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
beta lactam အမျိုးအစား ပဋိဇီဝဆေးများ (ဥပမာ penicillin,monobactams,carbapenems) နဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားသော ဆေးတွေလိုပဲ Xorim® ဟာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမှာတော့ ဖြစ်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။Xorim® ကို သုံးစွဲတဲ့ လူအနည်းစုမှာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်သော အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လက္ခဏာတွေကတော့
ယားယံသော အနီစက်များထွက်ခြင်း၊မျက်နှာ သို့မဟုတ် ပါးစပ်တို့ ဖောင်းကားရောင်ရမ်းလာတာကြောင့် ကောင်းစွာ အသက်မရှုနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်း လက္ခဏာများ။
အနီစက်များ၊အရည်ကြည်ဖုများထွက်ခြင်း (အဆိုပါ အရည်ကြည်ဖုတွေဟာ အလည်ခေါင်တည့်တည့်မှာ အမည်းစက်လေးရှိပြီး ဘေးမှာ ဖြူဖျော့တဲ့ ဧရိယာလေးတွေရှိကာ အနက်ရောင် အနားသားလေးတွေက စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေပါတယ်) သို့မဟုတ် အဆိုပါ အစက်လေးတွေဟာ တခါတရံ ဘေးဖက်တွေကို ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါသေးတယ် (ဒါဟာ Stevens-Johnson syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါတမျိုးရဲ့ လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်)။
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို cefuroxime ဟာ Candida ကပ်ပါးမှိုတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုကို များစေတဲ့အတွက် မှက္ခရုလိုမျိုး မှိုစွဲဝေဒနာတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။cefuroxime ကို ကာလကြာရှည်စွဲသုံးရင် ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ပိုဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Xorim® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အဆိုပါဆေးတွေကတော့
Aminoglycoside အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ။
ဆီးဆေးများ (ဥပမာ furosemide)။
သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါ ဆေးတွေကို သောက်သုံးနေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။cefuroxime ကို သုံးစွဲနေစဉ်ကာလမှာ သင့်ရဲ့ ကျောက်ကပ်ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကို မကြာခဏဆိုသလို စစ်ဆေးနေဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Cefuroxime ဟာ ပဋိသန္ဓေတား သောက်ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် cefuroxime နဲ့ ပဋိသန္ဓေတား သောက်ဆေးတွေကို အတူတကွ သုံးစွဲနေရတယ်ဆိုရင် (ကွန်ဒုံးကဲ့သို့သော) အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုပါ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်းတိုင်ပင်ရပါမယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Xorim® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Xorim® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သင်သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏကို ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး သင်ခံစားနေရတဲ့ ကူးစက်ဝေဒနာရဲ့ ပြင်းထန်မှုနဲ့ အမျိုးအစား၊အခြားသော ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေကို သုံးစွဲနေရခြင်းရှိမရှိ၊သင့်အသက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်၊ကျောက်ကပ်ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ စတဲ့ အချက်တွေပေါ် မူတည်လို့နေပါတယ်။
တနေ့တာအတွက် သောက်သုံးရမယ့်ဆေးပမာဏက ၇၅၀ မီလီဂရမ်ကနေ ၁.၅ ဂရမ် ဖြစ်ပြီး နှစ်ကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ ခွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၆ဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာ ကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိနေရင် ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သေချာစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မွေးကင်းစကလေးများ (အသက် သုံးပတ်အထိ)
တနေ့ကို 30 to 100 mg/kg ပမာဏနဲ့ ပေးနိုင်ပြီး နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် ခွဲပေးရပါမယ်။
အသက် သုံးပတ်နဲ့အထက် ကလေးများ
တနေ့ကို 30 to 100 mg/kg ပမာဏနဲ့ ပေးနိုင်ပြီး သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ် ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Xorim 750Mg Vial (ဇိုရင်းမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Xorim® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Xorim® ၇၅၀ မီလီဂရမ် အမှုန့် (ဖျော်ပြီးထိုးရန်)။
Xorim® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
CEFUROXIME INJECTION 750MG. https://www.drugs.com/uk/cefuroxime-
injection-750mg- leaflet.html. Accessed October 29, 2016
Xorim® (Cefuroxime sodium) Drug Information.
http://www.catalog.md/drugs/Xorim® (Cefuroxime sodium) .html. Accessed